sosegado : ကြိုးတန်း ဗိုက်ဗိုက်ဗိုက် နှင့် လန်းတယ်
Posted by sosegado at 5/23/2010 07:24:00 PM
ဝတ္ထု ကို တော့ ကြိုက်တယ် ရုပ်ရှင် တော့ မကြည့်ဖြစ်ဘူး ကိုဆိုဆီ ရေ
တယ် မြှောက်ပါလား တည်ငြိမ်အေး ရေ--
သိပ့်မမြှောက်ပါနဲ့ ဗျာ- သိပ့်မသိလို့ ပါ -
softdiffuse lighting နဲ့ ရိုက်ရမယ်ပေါ့ဗျာ-
ကင်မရာနဲ့ ရိုက်ချင်ရင်တော့ ဆော့ဖီတာ ( softfilter)နဲ့ ရိုက်ရမယ်လေ-အဲဒါမှမဟုတ်ရင်တော့-
( အဖူးအပိန့် မထွက်တဲ့ )ဓါတ်ပုံများ
ကိုရရှိအောင်ရိုက်နိုင်သည်ကိုအံ့ုသဖွယ်ရာတွေ့ မြင်
လက်တွေ့ ရိုက်ကူးခဲ့ပါသည် )
http://shwevideos.com/ မှာ ကြည့်လေး နောက်ထွက် တဲ့ဆိုဒ် အသစ် အဲ့ထဲမှာ ပါတယ်
movie box က မဆိုးဘူးပဲ..။
အိမ်မှာ သူငယ်ချင်းတွေ အများကြီးစုပြီး တပျော်တပါး ကြည့်လိုက်ဝေဖန်လိုက် ရယ်လိုက် လုပ်ရရင် ပျော်စရာကြီး နေား))
မြန်မာရုပ်ရှင်တွေတော့ သိပ်မကြည့်ဖြစ်ဘူး.. စိတ်ညစ်စရာ အိုဗာအိုက်တင် တွေ ကြည့်ရတာ စိတ်ကုန်လို့..
ကြိုးတန်းကို ဝတ္တုတိုဖတ်ဖူးတယ်...တော်တော်တောင်ကြာနေပြီ...ရုပ်ရှင်တော့ မကြည့်ဖူးဘူး...
စိုးမြတ်သူဇာနဲ့ထွန်းအိန္ဒြာဗိုလ် တို့ရဲ့ မျက်နှာတွေကိုကျတော့ အဖု အပိန့် အချိုင့်တွေကအစ အကုန်မြင်ရတယ်တဲ့...
မိုးဟေကိုနဲ့မယ်လိုဒီတို့ မျက်နှာလေးတွေကျတော့ ချောမွတ်နေတာပဲတဲ့...(အံ့ဖွယ်ပါလား) :)))
ဟုတ်တယ် http://shwevideos.com/ မှာ ကြည့်လို့ရ တယ်။ ရုပ်ရှင်တွေပဲထိုင်ကြည့်ဖြစ်မှာစိုးလို့ ...
ကွန်နက်မကောင်းတာကိုပဲ တစ်ခါတစ်လေ ကျေးဇူးတင်ရ မယ်။း)))
ကိုဆိုစီရေးတာနဲ့ စိတ်တောင် ၀င်စားသွားတယ်
ဒါပေမဲ့ မင်းသမီး မျက်နှာ အဖူးအပိန့်တွေပါမြင်ရတယ်ဆိုလို့
ဒီကလဲ မယ်လိုဒီမိုးဟေကိုတို့လို ချောချောမွတ်မွတ် တွေဘဲ မြင်ချင်တာပေါ့
ကိုတည်ငြိမ်...အဲဒီကားကို မဂ္ဂဇင်းမှာ ပါထဲက ကြည့်ချင်တာ...ဗိုက် ကိုရော မရေးတော့ဘူးလားဗျ...ဆက်တငံ့ငံ့ကြီး ဖတ်လိုက်ရသလိုပဲ...
ရုပ်ရှင်တွေပဲ ကြည့်နေတာ၊ ဇာတ်လမ်းလေးဘာလေးရေးပါဦး
Box ဘယ်မှာငှါးရသလဲဗျာ၊ အပေါ်ကပြောသလို ဇာတ်လမ်းလေးဘာလေးရေးပါဦး။
ကျနော့် အဲ့ဒီကားကို အရမ်းကြည့်ချင်တာ ။ ဆရာမခင်ခင်ထူးရဲ့ ၀တ္ထု အကယ်ဒမီပေးပွဲတုန်းက ခဏလေးတော့ကြည့်လိုက်ရတယ် ။
Movie Box ကို ပင်နီဇူလာသုံးထပ်က technosky မှာရပါတယ်
Web site က http://technosky.asia/ ပါ။
မချောရေ မိုးဟေကိုနှင့် မယ်လိုဒီ မျက်နှာလေးတွေက တကယ်ကိုချောပါတယ်၊
မချစ်ကြည် ရေ ဗိုက်ကရယ်နေရလို့ မရေးတော့ပါဘူး၊ အားလုံးကျေးဇူးပါပဲ။
အဟဲ. . ကျနော့် မျက်နှာလို ချောချောလေးကို ပြောတာလား :P
ရုပ်ရှင် အနေနဲ့ ဇာတ်လမ်းကို မေ့ထားပြီး ပြန်ကြည့်ဦးမယ်ဗျာ။
lay pyay yay, Thanks much for the link.. Otherwise me will be wanting to watch and wouldn't know where to get it.
သိပ်မစွံပါဘူး အစ်ကိုရာ ... တဲ့ ...
သောင်ပြင်မှာ လင်မယား နှစ်စုံတွဲ
ရန်ဖြစ်နေကြတာပဲ ရှိတာပါ တဲ့ ... :D
ဇာတ်လမ်း ဇာတ်ကွက် တချို့ ကို အမြည်း သဘော ရုပ်ရှင် ဖိုင်လ် နဲ့
ပေး မ ပြ တော့.... :(
ဒီရက်ပိုင်း အချိန်ရရင်တော့ ကြည့်လိုက်အုံးမယ်။
ကြိုးတန်းဇာတ်ကားကို ကင်မရာပိုင်းအယူအဆ၊ ရှုခင်းရှုကွက်၊ သရုပ်ဆောင်ပိုင်းအကုန်ကြိုက်တယ်ဗျာ။ ဒါပေမယ့် ဇာတ်သိမ်းပိုင်းမှာ တစ်ခုခုလိုနေသလားလို့။ တိခနဲ ဇာတ်ကို ဖြတ်ချလိုက်တယ်ထင်တာပဲ။